With elections due to be held in Zimbabwe later this year the pressure is on to address the needs of Zimbabwean expats living in the UK
AS Zimbabwe gears up to hold presidential elections later in 2013, Zimbabweans living in the United Kingdom are beginning to campaign to have their votes cast and counted as well.
Historically, Zimbabweans living in the diaspora have not been given votes, chiefly on account of political fears that they might vote against President Robert Mugabe. However, the latest polls suggest that Zimbabwean expats might actually cast the majority of their votes in favour of Mugabe’s ZANU PF, which might potentially allow the authorities to reconsider the current arrangement.
Prior to this year’s election, Zimbabwe will also hold a referendum on the country’s constitution, which the Zimbabwean diaspora won’t be allowed to weigh in on either.
Expat Zimbabweans have been expressing their dismay at their lack of vote and challenged the Zimbabwean ambassador to London, Gabriel Machinga, on the contentious issue at a recent event hosted by the Business Council for Africa (BCA).
However, with the economic situation in Zimbabwe barely under control it will be unlikely that the cash-strapped African country will implement any kind of voting reforms soon enough for this year’s polls.
Tags: Elections and VotingExpat LifeRobert Mugabezanu pfZimbabwe